DeepMind AI ayaa si fiican u saadaalin karta cimilada | Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 06/10/2021 14:03 | Saadaalin
Saadaasha hawada sida sayniska ayaa horay u socota iyadoo ay ugu wacan tahay horumarinta farsamada. Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira barnaamijyo kombiyuutar oo dhowr ah oo awood u leh inay si toos ah u saadaaliyaan waqtiga iyo meesha uu roob ka da'ayo. Shirkadda ee Deepmind waxay samaysay sirdoon macmal ah oo awood u leh inay saadaaliso ku dhawaad ​​goorta iyo meesha uu roobku ka da'ayo. Shirkadani waxay la shaqaysay khubarada saadaasha hawada ee UK si ay u samayso qaab ku habboon samaynta saadaasha muddada gaaban marka loo eego hababka hadda jira.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonnaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato boorsada Robleda, tikniyoolajiyadda saadaasha hawada ee shirkadda DeepMind.
1 Saadaasha hawada
2 Horumarinta DeepMind
3 Tijaabooyinka DeepMind AI
4 Horumarinta saadaasha hawada
DeepMind, oo ah shirkad sirdoon macmal ah oo fadhigeedu yahay London, wuxuu sii wataa xirfadiisii ​​ku aaddan barashada qoto dheer dhibaatooyinka sayniska ee adag. DeepMind waxay soo saartay aalad waxbarasho oo qoto dheer oo la yiraahdo DGMR iyadoo lala kaashanayo Xafiiska Met ee Adeegga Cimilada Qaranka ee Ingiriiska, kaas oo si sax ah u saadaalin kara suurtagalnimada roobka 90ka daqiiqo ee soo socda. Waa mid ka mid ah caqabadaha ugu adag saadaasha hawada.
Marka la barbardhigo aaladaha jira, daraasiin khubaro ah ayaa rumeysan in saadaasha DGMR ay ugu fiican tahay dhowr arrimood, oo ay ku jiraan saadaasheeda meesha, baaxadda, dhaqdhaqaaqa iyo xoogga roobka, 89% waqtiga. Qalabka cusub ee DeepMind wuxuu furayaa fure cusub oo bayoolaji ah oo saynisyahannadu isku dayayeen inay xalliyaan muddo tobanaan sano ah.
Si kastaba ha noqotee, xitaa hagaajinta yar ee saadaasha ayaa muhiim ah. Saadaasha roobka, gaar ahaan roobka culus, ayaa muhiim u ah warshado badan, laga bilaabo hawlaha bannaanka ilaa adeegyada duulista iyo xaaladaha degdegga ah. Laakiin in la saxo waa adag tahay. Go'aaminta inta biyo ah ee cirka ku jira iyo goorta iyo meesha ay ku dhici doonaan waxay ku xiran tahay hawlo badan oo cimilada, sida isbeddelka heerkulka, samayska daruuraha, iyo dabaysha. Dhammaan arrimahan ayaa ah kuwo naftooda ku filan oo adag, laakiin way ka adag yihiin marka la isku daro.
Tiknoolajiyadda saadaasha ugu wanaagsan ee la heli karo ayaa adeegsanaysa tiro badan oo ku -simidda kombiyuutarka ee fiisigiska hawada. Kuwani waxay ku habboon yihiin saadaasha muddada fog, laakiin aad uguma fiicna saadaalinta waxa dhici doona saacadda soo socota. Tan waxaa lagu magacaabaa saadaal degdeg ah.
Farsamooyin barashada qoto dheer oo hore ayaa la soo saaray, laakiin farsamooyinkani badiyaa si fiican bay u shaqeeyaan, sida saadaalinta goobta, iyo kharash kale, sida xoog saadaalinta. Xogta raadaarka ee roobka culus ee caawisa saadaalinta roobka degdega ah ayaa weli ah caqabad weyn oo ku wajahan khubarada saadaasha hawada.
Kooxda DeepMind waxay adeegsadeen xogta radar si ay u tababaraan AI. Wadamo iyo gobollo badan ayaa si joogto ah u daabaca sawirro cabbiraadda raadaarka oo la socda samaynta daruuriga iyo dhaqdhaqaaqa maalinta oo dhan. Tusaale ahaan, Boqortooyada Midowday (UK), akhrinta cusub ayaa la dhajiyaa shantii daqiiqaba mar. Isu-geynta sawirradan, waxaad heli kartaa fiidiyow joogsi-joogsi oo casri ah oo muujinaya sida qaabka roobka dalku isu beddelo.
Cilmi -baadhayaashu waxay xogtan u diraan shabakad jiil qoto dheer oo la mid ah GAN, oo ah AI tababbaran oo soo saari karta shaybaarro xog cusub oo aad ugu eg xogta dhabta ah ee loo isticmaalo tababarka. GAN waxaa loo isticmaalay in lagu abuuro wajiyo been abuur ah, oo ay ku jiraan Rembrandt been abuur ah. Xaaladdan oo kale, DGMR (oo u taagan "Generative Deep Rain Model") waxay baratay inay abuurto sawirro raadeer been abuur ah oo sii wada taxanaha cabbirka dhabta ah.
Tijaabooyinka DeepMind AI
Shaakir Maxamed, oo hormuud ka ahaa cilmi baarista DeepMind, ayaa sheegay in tani ay la mid tahay daawashada xoogaa yar oo filim ah oo la qiyaasayo waxa xigi doona. Si loo tijaabiyo habkan, kooxdu waxay weydiisatay 56 khubaro saadaasha hawada ka socota Xafiiska Saadaasha Hawada (oo aan ku lug lahayn shaqada) si ay u dhex galaan jilitaanka jireed ee aadka u horumarsan iyo koox ka soo horjeeda.
89% dadka ayaa sheegay inay doorbidaan natiijooyinka ay bixisay DGMR. Algorithms -ka barashada mashiinka guud ahaan waxay isku dayaan inay sare u qaadaan qiyaas fudud oo ah sida saadaashaadu u wanaagsan tahay. Si kastaba ha ahaatee, saadaasha cimiladu waxay leedahay dhinacyo badan oo kala duwan. Waxaa laga yaabaa in saadaasha ay ku heshay xooga roobka khaldan meesha saxda ah, ama saadaasha kale waxay heshay isku -darka saxda ah ee xoojinta laakiin meel qaldan, iyo wixii la mid ah.
DeepMind waxay sheegtay inay sii deyn doonto qaab dhismeedka dhammaan borotiinka loo yaqaan sayniska. Shirkaddu waxay adeegsatay borotiinkeeda AlphaFold oo isku laabanaysa sirdoon macmal ah si ay ugu abuurto qaab -dhismeedyo ilaaliya aadanaha, iyo sidoo kale khamiirka, duqsiyada miraha iyo jiirarka.
Wadashaqeynta DeepMind iyo Met Office waa tusaale wanaagsan oo la shaqaynta isticmaaleyaasha ugu dambeeya si loo dhammaystiro horumarka AI. Sida iska cad tani waa fikrad wanaagsan, laakiin inta badan ma dhacdo. Kooxdu waxay mashruucan ka shaqaynaysay dhowr sano waxaana talo ka helay khubaro ka socota Xafiiska Saadaasha Hawada mashruuca. Suman Ravuri, oo ah cilmi -baare cilmi -baaris ka ah DeepMind, ayaa yiri: "Waxay kor u qaadeysaa horumarinta qaabkeenna si ka duwan hirgelinteenna." "Haddii kale, waxaan abuuri karnay moodel aan faa'iido gaar ah u yeelan doonin aakhirka."
DeepMind ayaa sidoo kale xiiseyneysa inay muujiso in AI ay leedahay codsiyo wax ku ool ah. Shakir, DGMR iyo AlphaFold waxay qayb ka yihiin sheeko isku mid ah: shirkadu waxay isticmaashaa waayo -aragnimadooda sannadaha xallinta xujooyinka. Waxaa laga yaabaa in gabagabada ugu muhiimsan halkan ay tahay in DeepMind ay ugu dambayntii bilawday taxista dhibaatooyinka sayniska ee dunida dhabta ah.
Horumarinta saadaasha hawada
Saadaasha cimilada waa in lagu taageeraa horumarinta tiknoolajiyadda maaddaama aan ku sii dhowaaneyno kuna sii dhowaaneyno inaan si buuxda u fahamno sida jawigeennu u shaqeeyo. Marar badan qofka bini -aadamka ah iyo xisaabtiisu waxay ku dhici karaan khaladaad caadi ah oo laga fogaan karo kobcinta garaadka macmalka ah.
Saadaasha cimiladu waxay fure u tahay bini -aadannimada maadaama aan wax badan ka faa'iidaysan karno khayraadka biyaha oo aad u hufan oo laga fogaado masiibooyinka duufaannada iyo roobabka culus. Sababtaas awgeed, khubarada saadaasha hawada ayaa si isa soo taraysa ugu heshiiya inay horumariyaan mashaariic sirdoon macmal ah oo saadaaliya roobka.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan uga baran karto mashruuca DeepMind iyo sifooyinkiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Saadaalin » DeepMind AI ayaa si fiican u saadaalin karta cimilada